Usoro iji jiri igwefoto a na - eyi - OMG Solutions
Usoro iji Kamera Ndị A Na-eme Nwa Ahụ
Igwefoto ahụ mebere ahụ abanyela n'ime ụlọ ọrụ mmanye iwu nke ngwaọrụ kachasị bara uru, mgbe ọ nwesịrị kamera ndị ahụ ma jiri ha na mmega ahụ na usoro nyocha, enwere nkwekọrịta a na nke ahụ; Ọ dị ezigbo mkpa idobe ụdị mmejọ ụfọdụ site n'aka ndị ọrụ iwu na ụmụ amaala. Ọ bụghị ozi na igwefoto ndị ahụ na-eyi anụ emeela ka ha lebara anya nke ọma ọkachasị ndị ụlọ omebe iwu. Ndi okacha mara na ndi mmanye iwu etinyewo ezigbo echiche banyere ikike di omumu o na-eweta karie ike inyocha ndi oru ha. E lere mmemme igwefoto ahụ yi dị ka otu ụzọ ị ga-esi mee ka onye ọ bụla mara ọrụ, mee ka o doo anya na mmekọrịta dị n'etiti ndị uwe ojii na ndị obodo (mmekọrịta adịghị oke ka ndị uwe ojii anaghị enwe mmasị).
Dịka anyị kwuru na mbụ, teknụzụ nke na-enye ihe onyonyo onyonyo ebidoghi ịdị na 21st narị afọ. Na mbido 90, enwere igwefoto dashboard nile eji eme ihe edekọ maka esemokwu ahụ ma ọ bụ ihe ọ bụla na-eme n'etiti ndị isi na ụmụ amaala mgbe ha nọ na-echekwa. Agbanyeghị na nbughari izizi nke echiche a, ndị uwe ojii na-emegide ya ọtụtụ n'ime ha achọghị "nnukwu nwanne" dịka ha na-akpọkarị igwefoto mgbe ahụ. Ma ka oge na-aga, enwere ịrị elu ebe ụmụ amaala na-ebo ndị ọrụ ebubo nke ọtụtụ ihe, nke a gụnyere gụnyere iji ike eme ihe n'okwu ikpe. N'oge na-adịghị anya, ndị isi ndị ahụ malitere ịnakwere igwefoto dashboard na n'oge na-adịghị anya, ọtụtụ ndị nabatara ya. N'oge ahụ, igwe onyonyo mechiri emechi (CCTV) na-agbada ala ma nwekwaa uru bara uru iji dozie okwu dị mfe na ọtụtụ ihe akaebe. Ọzọkwa, ihe e mepụtara nke smartphone a na-enyelarị onye ọ bụla igwefoto, onye ọ bụla nwere ike ịse foto oge ọ bụla na nke onye ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla. N'oge na-adịghị anya ndị nwere ekwentị na-eji ha idekọ ndị uwe ojii mgbe ha nọ ọrụ, nke a mere ka ọ dị mkpa na ọ dị mkpa na ndị uwe ojii nwere teknụzụ nke ha maka nyocha. Na nyocha emere na US na nso nso a, achọpụtara na ọtụtụ ụmụ amaala ekwenyela iji igwefoto ahụ yi. Ngwaọrụ ha nabatara ma kwado ya ga-anabatakwa.
Mmụba dị na nnabata na usoro nke teknụzụ a na-ewetara ụfọdụ nsogbu ndị siri ike, ụfọdụ n'ime mbipụta a gụnyere; mgbe enwere ike iwere ndekọ, ụkpụrụ a ga-ezute maka ka echekwaa data ahụ wee jiri ya mee ihe, kpughere ya ma ga - emekọrịta ya na ọdịnihu na GPS. Agbanyeghị, ụfọdụ ndị obodo na-arụ ụka na ụgwọ ọrụ nke mmemme a ga-akacha uru ya karịa n'ihi nke a na-ekpebi ịghara iji ya ma ọ bụ itinye ya. N'edemede a, anyị nwere olile anya ịnye ntuzi aka na obodo ọ bụla ọ họọrọ ị ga na-aga na teknụzụ, site na nke a, anyị ga-ezere ịtụle ma ekwesịrị ịnwe mmemme ahụ. Anyị na-eleba anya na atumatu dị mkpa maka ọmarịcha ọrụ ọha na eze na ichebe ikike obodo. Issuesfọdụ nsogbu ndị ngalaba-atụle ga-atụle bụ:
Ndị uwe ojii na-aza ajụjụ
Mmetụta ịkpa ókè, ma mgbe ndị nkịtị na ndị ọrụ mmanye na-emekọrịta ihe
Nchegbu nzuzo nke ndị ọrụ na ndị otu obodo
Mmetụta ọ na-akpa na ọha na eze
Ngosipụta na ngalaba
Na-enye ohere maka ọzụzụ ndị uwe ojii
Ma ndị uwe ojii ma ndị uwe ojii na-ekwu “ngbasa ozi vidiyo”
O choro uzo agha, nke a gunyere ikike mmadu na ego nke usoro eji aru oru.
Agbanyeghị, igwefoto eyi uwe abụghị panacea. Plementmejuputa ha n’enweghi ezigbo usoro iji kwado ha nwere ike ibutere ndị ụlọ omebe iwu ihe mmebi dị ukwuu ma ha bu n’obi ije ozi. Otu n'ime nchegbu ndị a bụ mmetụta nwere ike ịnwe n'ọtụtụ ụkpụrụ na ikike dị ukwuu nke usoro iwu. N'usoro, ụlọ ọrụ ga-elele uru na ọghọm dị na igwefoto ahụ na-eweta mgbe ị na-ekpebi ma otu esi etinye ha n'ọrụ dabara na ọha na-etolite etolite na-etolite. Anyị na-anwa ileba anya n'okwu ụfọdụ nwere ike iche ndị ọrụ mmanye iwu na ndị obodo ihu mgbe ha na-anwa imejuputa igwefoto ahụ. Kọmitii na-ahụ maka oru banyere ndozi ndị uwe ojii na-enye ụfọdụ ndụmọdụ ọ na-eche na enwere ike iji dozie ma ọ bụ ikekwe belata nsogbu ndị a. Achịkọtara ndụmọdụ ndị a n'okpuru ebe a:
Ekwesịrị iji kamera ndị ahụ na-eyi naanị iji bulie ebumnuche doro anya ma gosipụta ya, agaghị eji ya maka ụlọ ma ọ bụ ndị na-abụghị ọkachamara maka nsogbu metụtara ọrụ na-abụghị ọrụ.
Ndị ga-eme iwu ga-ekwurịrị ka ndị ọrụ mmanye nọrọ ebe a na-ekwu okwu n'ihi na e wepụrụ kamera ahụ nwere ike iji rụọ ọrụ na mpaghara n'okpuru ikike ha.
Ndị na-eme iwu ga-eso ndị obodo wee soro ha nwee nkwekọrịta gbasara iwu ndị ha na-ekwenye na otu ọ ga-esi chịkwaa iji igwefoto ahụ eyi.
Mgbe ị ga-edekọ
Iwu doro anya akọwapụtara kwesịrị ịnwe ngalaba nke gunyere ụdị ihe omume imekọ ma ọ bụ nwee ike kwuo naanị na edekọ ọrụ niile metụtara ọrụ.
Ndị ọrụ agha ga-enwerịrị ike pụta dị ọcha ma gwa ụmụ amaala na-edekọ ha, ha nwere ikike ọ bụla ịmata na a na-edekọ omume ha n'oge ọ bụla.
Ozugbo nwa amaala rịọrọ ka a kwụsị ndekọ, a na-atụ anya ka onye uweojii kwụsị ihe ndekọ ozugbo.
Amụma ahụ kwesịrị ikwuputa nke ọma ihe dịịrị onye uwe ojii ịme gbasara ihe ndekọ, yana ntaramahụhụ a ga-enweta megide imehie na imebi iwu.
Mmezi nke data na iji data
Vidiyo ọ bụla enyochagharị ma gosipụtara na ọ nwere ihe akaebe ga-edobere ya ma debe ya. Enwere ike ihichapụ vidiyo na-apụtaghị ìhè mgbe oge ụfọdụ gachara.
A ga-echekwa nche ọnụnọ nke ihe akaebe ahụ nke ọma ma dekwa ya nke ọma.
Ọbịbịa onye ọrụ ọhụhụ na vidiyo a ga - amachaghị ya ma enyere ha ohere ịnweta vidiyo ndị a, ekwesịrị ịgagharị ihe ndekọ ọrụ ha ma ekwenyekwa ndekọ.
Mgbe ha dechara akụkọ mbụ, ekwesịrị ịhapụ ndị ọrụ nyocha ka ha nyochaa ndekọ ha dịka ọ nwere ike inyere ha aka icheta ihe ịgbakwunye.
Ekwesịrị ịnwe ụkpụrụ nchekwa data dị mma yana ndị ọkachamara ịntanetị na-ekenye ihe iji gbochie ịnweta data ndị a n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị site na ime ụzọ dịpụrụ adịpụ na ichekwa ihe nzuzo.
Usoro nyocha dị mma kwesịrị ịdị ịnweta ụzọ na-ekwesịghị ekwesị ma ọ bụ na-egbochi faịlụ data ahụ.
Teknụzụ nke ala
Ojiji nke teknụzụ ndị na-akpado agha belata belata ọ bụrụ na ekwesịrị ịme ya, a ga-enye ikike ikike ikpe
Mgbe ọ bụla aghaghị ime ihe gọọmentị ọ bụla ga-eme, ọ ga-achọ ka onye nnata ahụ jiri ọrụ iwu ga na-eduzi otu onye na-ekerịta ihe naanị iji zere esemokwu.
Nweta data ọha
Mgbe ọ bụla a napụrụ mmadụ ọbụlagodi vidiyo vidiyo, ekwesịrị ịhapụ ha ka ha nyochaa vidiyo dị otú ahụ ebe ọ bụ na ha apụta na ya, ha nwere ikike zuru oke ịhụ ya ma nyochaa ya
Lekagbu vidiyo dị ka arịrịọ ndekọ ọhaneze ekwesịrị ka ekwenye ya na mmezi zuru oke.
Ọ bụ ezie na ịhapụtara vidiyo kwekọrọ na ụlọ ikpe ọ na-aga n'ihu, ọ dị ezigbo mkpa na ọ na-agbaso usoro iwu ọ bụla.
Ekwesịrị inye ndị ọrụ ọ bụla ọ bụla ọ ga - enye igwefoto ahụ, ha ga - enwe ike iji ngwaọrụ ahụ nke ọma.
Ndị ọrụ ndị na-eji kamera ahụ eme ihe a ga-akụziri ka esi ewepụ igwefoto ha ma ọ bụrụ na ọ gụnyere ime ya mgbe ị na-edebanye akụkọ mbụ.
Onye uwe ojii kwesịrị ịbụ onye a zụrụ azụ nke ọma na ọzụzụ banyere amụma nzuzo yana otu esi zere imebi ha iji zere nsogbu.
Odikwa atumatu na mgbanwe
Iwu niile metụtara kamera ahụ nwere, ekwesịrị ide ya iwu ma bụrụ nke ọha ka ọ kacha nwee, igwefoto ahụ na-erute ma ndị ọrụ uwe ojii na ndị nkịtị aka. Ndi nkiti nwere ikike ịmara atumatu na-eduzi ngwaọrụ ha nabatara nwere ike iji mee ka ndi obodo mara nke oma ma nyere ndi uwe ojii aka n’ọrụ ha.
Ngalaba ahụ kwesịrị ịdị njikere n’oge ọ bụla iji nyochaa ụkpụrụ dị iche iche ma gbanwee ihe site n’oge ruo n’oge site na ntinye nke ọhaneze na ngosi ha banyere mgbanwe ọ bụla mgbe emere ha.
Atumatu kwesiri ekwesi na ego ndi ozo
Federal Federal kudade kwesiri ịdị dabere na iku usoro nke iwu dị iche iche ma dị irè nke ga-ahụ maka iji nchekwa yana gbochie ịda iwu nzuzo.
Na mmechi, enweghị iwu doro anya ebe ọ bụla na-ekwupụta na a ga-anabata ma ọ bụ jụ igwefoto ahụ mebere ya, ikike niile nwere ike ịhọrọ onwe ha ma ọ bụrụ na ha chọrọ ya mara n'ezie ihe kpatara ha ji aga. Agbanyeghị na mpaghara ndị etinyere iji kamera ahụ na-eyiri site na ịgbaso ntuziaka ndị a ga - akachasị hụ na mmemme ahụ na-akwado ikike na uru nke usoro iwu, nke dị ezigbo mkpa na obodo niile.
Nzuzo 6063 3 Echiche Taa